VPS - Shweman Online Media - Page 41 of 281 - News
လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ ဖြစ်လေရာ ဘဝတို့တွင် သူတစ်ပါးထက် ရုပ်အဆင်း လှပ လိုသူတို့ သည်ကောင်းမှု ( ၄ ) ပါး ကိုပြုကြ ရမည် ဟု ကျမ်းဂန်တို့ ၌ဆို ကြ၏ ။ ထိုကောင်းမှု ( ၄ ) ခုသည်ကား ၁။ အဝတ်အစား
မကြာခင်ရောက်ရှိတော့မယ့် ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့လေးကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသာမက ကမ္ဘာကလူတွေပါလေးစားချစ်ခင်ကြည်ညိုနေရတဲ့ အမေစုရဲ့(၇၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေ့ကိုလေးစားချစ်ခင်ကြတဲ့ သားသမီးတွေကတော့ အမေစုရဲ့မွေးနေ့လေးကို မှတ်မှတ်ရရလေးဖြစ်အောင် စီစဉ်နေကြပါတယ်။ မနှစ်က အသက်(၇၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတော့ လူအယောက်(၇၄၀)နဲ့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံမှာ အမေစုရဲ့မွေးနေ့ကို ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ Covid-19 ကြောင့် လူစုလူဝေးနဲ့ပြုလုပ်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့် မောင်မောင်အေးကတော့ လူအယောက်(၇၅၀၀) ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူ
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီး အဆိုတော် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ဝိုင်းစုကတော့ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် အဆိုပိုင်းမှာရော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ တော်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ဝိုင်းစုကတော့ အရုပ်မလေးလို ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဝိုင်းစု သူမချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကို အောင်လနဲ့ တရားဝင်တွဲနေကြောင်းကို ချပြထားပြီး သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု
မိဘမဲ့ကလေးအယောက်(၅၀)အတွက် ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
ခန့်စည်သူကတော့ ဟိုးအရင်အချိန်တွေကတည်းက အခုထိ ရုပ်ရှင်၊ဗွီဒီယိုတွေမှာ အများဆုံးနေရာယူထားနိုင်တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင် အလှူအတန်းရက်ရောသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့လည်း ပရိသတ်တွေက လေးစားချစ်ခင်နေရသူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19 ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေစတင်ကတည်းက နေ့စဉ်ရက်ဆက်လှူဒါန်းပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ခန့်စည်သူကတော့ မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ မွေးနေ့အလှူအဖြစ် အလှူကြီးအတန်းကြီးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း တကယ်လိုအပ်ပြီး အကျိုးများတဲ့အလှူလေးတစ်ခုအဖြစ် စွန့်ပစ်ခံမိဘမဲ့ကလေးအယောက်(၅၀)အတွက် ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့အလှူလေးကို မျှဝေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီး3လုံး, ကြက်သွန်ဖြူအတက်ကြီး5တက်, ဂျင်းအနေတော်အတက် တစ်တက်!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတ်ထိုး, ကြက်သွန်ဖြူ5တက်အခွံခွါ, ဂျင်းကိုအခွံခွါ ပါးပါးလှီး!! ရေ2လီတာ ပွက်ပွက်ဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတွေထည့်ပီး နာရီဝက်ပြုတ်!! ပြီးရင်အဖတ်တွေဆယ်ပီးပစ်လိုက်ပါ!! အရည်ကိုအအေးခံပီး အစာမစားခင်နာရီဝက်အလိုမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာသောက်ပေးပါ!! တစ်နေ့3ကြိမ်ပေါ့!! တစ်ပတ်ကြာရင် ဗိုက်ပြုတ်သွားပါတယ်တဲ့ ကျမလဲအခုမှလုပ်ကြည့်တာပါ ချစ်တို့လဲ
ရွာကိုပြန်ရောက်တုန်းလေးမှာ အပန်းဖြေရင်း စိမ်းလန်းစိုပြေပြီး အေးချမ်းသာယာတဲ့ သူတို့ရွာလေး အလှကို ပြသလိုက်တဲ့နေမင်း
ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေမင်းကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ အထူးတလည်ပြောစရာမလိုအောင်ကို ထူးချွန်လွန်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအကြည့်တွေကအစ အသက်ဝင်လာအောင် ဖန်တီးပြီး ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်တတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းရဲ့ထိမိပြောင်မြောက်တဲ့အိုက်တင်တွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးချစ်ခင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းက ဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါင်း မြောက်များစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။ လတ်တလောမှာတော့ နေမင်းက သူရဲ့ဇာတိမြေလေးဖြစ်တဲ့
ဘုန်းဘုန်း ကျောင်းအရှေ့ဘက် ပိန္နဲတောက ဒကာကြီးဦးကောင်းက ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ချလို့တဲ့. ဘုရာ ဘယ် ဦးကောင်း..တပည့်တော်တို့ကျောင်းအရှေ့က ပိန္နဲတောကလေအဲ့ဒိပိန္နဲတောကြီးက လူမေနဘူးဆိုဟုတ်တယ်..သူတို့က ရွာတောင်အစပ်က စိုက်ပျိုးရေးခြံထဲမှာ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးနေကြတာသားသမီးလဲမရှိဘူး “” ငါ မသိပါဘူး..သူတို့ကို…””“” ဘယ်သိမှာတုံး…အဘိုးကြီးရော အဘွားကြီးရော ဒိဌိတွေလေ.. တသက်နဲ့တကိုယ်ဘုန်းကြီးကျောင်း ဒီတခါလာဖူးသေးတာပဟင်..ဟုတ်လား…”” ဆရာတော့်စိတ်ထဲ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းသွားပါတယ်… စိတ်လဲ စိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်… ဘုန်းဘုန်းက
ခံစားခွင့်နှင့် အချိန် ..! (အရမ်းကောင်းလို့ အချိန် ၃ မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား )
ခံစားခွင့်နှင့် အချိန် ..! (အရမ်းကောင်းလို့ အချိန် ၃ မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား ) တစ်ခါက.. တောဘုရင် ခြင်္သေ့မင်းကြီး တစ်ကောင်ရှိပါသတဲ့..။ သူ့မှာ အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တာဝန်ကျေတဲ့ လူယုံတော်တစ်ယောက်လည်းရှိတယ်။ သူကတော့ ရှဉ့်တစ်ကောင်ပဲဖြစ်တယ်။ရှဉ့်ကလေး ဟာ ခြင်္သေ့မင်းကြီးခိုင်းသမျှကို မညဉ်းမညူဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိတယ်။အဲဒီလို ဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာလည်း.. မြန်မြန်ပြီးတဲ့အပြင် အမှားအယွင်းမရှိသလောက်လည်း နည်းပါးတာကြောင့် ခြင်္သေ့မင်းကြီးက
သက်တော် ၁၁၆ နှစ် နောင်တခိုဆရာတော် ဖူးထိုက်သူများဖူးကြပါနော်
သက်တော် ၁၁၆ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့နောင်တခိုဆရာတော်ရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုဖူးထိုက်သူများဖူးမျှော်စေရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… သီလ သမာဓိ ပညာနှင့်ပြည့်စုံပြီးအနာရောဂါ မရှပကတိကျန်းမာရေးနှင့်ပြည့်စုံနေသောသက်တော် ၁၁၆ နှစ်ရှိ သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ဘုရား။ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်ခရိုင်ကျိုက်ဒုံမြို့နယ် နောင်တခိုအုပ်စု နောင်တခိုကျေးရွာရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ။ ၁၉၈၀ ခုနှစ် ကာလတွင် နောင်တခို။နောင်တမန်။ဝက်ဒုံကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့တွင်တစ်ပါးတည်း တလှည့်စီကျောင်းထိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ယခု၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် သက်တော် ၁၁၆ နှစ်ပြည့်သွားပြီးဖြစ်ပါသည်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ထိုင်းနိုင်ငံမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု
Newer 1 … 39 40 41 42 43 … 281 Older